Nokia waxay soo bandhigeysaa taleefankeeda cusub bisha Diseembar 5 | Androidsis
Nokia ma aysan si rasmi ah u soo bandhigin wax taleefan ah dhowr bilood, 6.2 iyo 7.2 ayaa ka mid ahaa kuwii ugu dambeeyay. In kasta oo ay jireen warar xan ah muddo bilooyin ah oo taas soo jeedinaya ka hor dhamaadka sanadka taleefan cusub ayaa la filan karaa by soo saaraha. Tani waa wax horeyba loo xaqiijiyay, maxaa yeelay astaanta ayaa ku dhawaaqday soo bandhigida qalabkeeda cusub.
Waqtiga xaadirka ah majiraan magacyo ama xog ku saabsan taleefankan cusub ee Nokia ah. Astaantu waxay ku dhawaaqday taariikhda ay ku soo bandhigeyso shabakadaha bulshada, iyadoo ku dhawaaqeysa imaanshaha xubin cusub oo qoyskeeda ah. Ma sugi doonno waqti dheer inaan ku dhawaaqno.
Waxay noqon doontaa Diseembar 5 marka qalabkan cusub ee sumadda si rasmi ah loo soo bandhigi doono. Fiidiyowga lagu soo rogay shabakadaha bulshada, ma jiraan wax tilmaamo ah oo ku saabsan taleefanka. In kasta oo ay jiraan xan badan, gaar ahaan tilmaamaya waxa uu noqon lahaa Nokia 8.2, kuwaas oo ay durba jiraan warar xan ah oo bilooyin ah shabakadaha.
Waxyaabaha ugu cusub ee lagu soo kordhiyay qoyskeena waxaa la bilaabi doonaa 5 Diseembar 2019.? La soco si aad wax badan u ogaato! #NokiamobileNool pic.twitter.com/iYqPxyOTKP
- Nokia Mobile (@NokiaMobile) November 22, 2019
Sugida gaaban si loo ogaado, inkasta oo ay u badan tahay inuu jiro daadin ama in ka badan ayaa la yaqaan ka hor soo bandhigiddeeda. Caadi ahaan, waxaa jira tilmaamo ku saabsan taleefankee laga filan karaa dhacdadaas. Xayeysiiskiisa laguma xallinayo inta ay le'eg tahay qaabkani.
Waxay sidoo kale noqon kartaa taleefanka 5G ee ugu horreeya ee Nokia, maaddaama summaddu ay ka mid tahay kuwa leh shatiyada ugu badan arimahan. Bilaabid hubaal ah inay daneyneyso isticmaaleyaal badan, oo rajeynaya in si ballaaran loo helo 5G taleefannada sanadka 2020, halkaasoo la filayo inay koror ku yeelan doonaan tirada la heli karo.
Dhacdadan waxaa la qaban doonaa Diisambar 5, haddaba. Xaqiiqdii waxay noqon doontaa bilaabitaankii ugu dambeeyay ee sumadda 2019. Waan arki doonaa haddii xanta ay run tahay iyo Nokia 8.2 waa taleefankii lagu soo bandhigay munaasabadda, waxay sidoo kale noqon kartaa 2.3, mid ka mid ah taleefannadeeda cusub ee dhammaadka hoose.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Nokia ayaa soo bandhigeysa taleefan cusub bisha Diseembar